Khabiirka Kala Duwan: Muxuu Mudan Yeelan Karo Ma Bedeli Karo SEO
Waqti dhow, waxay noqotey aragti caadi ah ilaa iyo inta aad ku fiicantahayWaxyaabaha kale, inta soo hartayna waxay isku daryeeli doonaan naftooda. Waa run in suuq-geynta SEO iyo Content waa la taaban karo xiriir wanaagsan leh waa lagama maarmaanee SEO. Si kastaba ha noqotee, ololeyaal ku filan oo wax ku ool ah, waxaad u baahan doontaa wax ka badan waxoogaa wanaagsan.
Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Sare Adeegyada Digital, Nik Chaykovskiy wuxuu sharaxayaa sababta ay tayada tayada uhogtahay aysan ku filneyn in ay si hufan ugula shaqeyso SEO.
Aragtida, fikradu waa sax. Dhamaan mashiinnada raadinta ayaa isku dayaya inay bixiyaandadka isticmaala 'saldhigga ugu fiican iyo sidaas darteed waxay leeyihiin algorithms kuwaas oo darajo heer sare oo wanaagsan. Markaad soo saarto waxyaabo dheeraad ah, waad awoodi kartaawaxay leeyihiin mawduucyo dheeraad ah oo laga heli karo codsiyada raadinta badan. Intaa waxaa dheer, hadba inta uu ka kooban yahay mid wanaagsan, dadka isticmaala badan ayaa booqanayagoobtaada.
Dhinaca kale, haddii aanad haysan wax wadaag ah, ma taagnafursada ah in aad hayso SEO. Haddii maaddadu ay liidato oo aan la aamini karin, natiijooyinkaagu waxay noqon doonaan kuwo isku mid ah. Si aad u noqoto mid wanaagsan,waa inay la kulmaan heerar kala duwan si loo xaqiijiyo inay fiicantahay. Tani waxay u dhaxaysaa midnimada iyo kartida, wax ku oolnimada iyo madadaalada.
Aan ka fikirno in waxyaabaha aad u wanaagsan tahay iyo in aad soo saartid contentsi joogto ah..Mawduucani waa mid aan haboonayn illaa inta aan la arki karin. Haddii dadka isticmaala aanay ka warqabin shaqadaada, markaa ma awoodaanakhri ama arag. Iyadoo horumarinta Google, waxay weli ku tiirsan tahay jawaab celinta dadka isticmaala si ay u caawiso darajada tayada content. Sidaa darteed,haddii dadka isticmaala aysan kari kari karin shaqadaada, Google ma xukumi karo tayada content.
Inta badan jawaab-celinta waxaa badanaa lagu bixiyaa saamiyada iyo isku-xirnaanta,kaas oo Google u tixgelinayo inuu yahay mid la aamini karo. Markaad hesho xiriiro fara badan, waxaa laguu arki karaa ilo wanaagsan oo ah maaddo iyo natiijo ahaan, waxaad noqon doontaakor u kaca qiimeynta raadinta. Si kastaba ha noqotee, xiriiriyahan aan la helin mawduuc wanaagsan oo kaliya. Waa inaad bilowdid waxqabad adiga oo kor u qaadayasameynta xidhiidhadaada, mararka qaarkood adoo sameynaaya qaar ka mid ah xiriirada gacanta.
In aad haysato wax wanaagsan oo ku saabsan boggaaga waa bilow wanaagsan. Si kastaba ha ahaatee, waa inaadmarnaba dayacin arrimaha istiraatiijiga ah ee lagama maarmaanka u ah boggaaga si aad ugu daro natiijooyinka raadinta raadinta. Inta badan bogagga template, sidaWordpress iyo Wix waxay leeyihiin qalab farsamo taas oo ka dhigaysa mid sahlan in lagu muujiyo mashiinka raadinta.
Tani, si kastaba ha ahaatee, kuma filna. Waxaad u baahan doontaa inaad sameyso xogta Metaiyo cinwaanka cinwaanka, hagaajinta amniga goobtaada, cusbooneysii faylkaaga robits.txt, abuurto oo cusboonaysii khariidadda bogga iyo kordhinta xawaarahagoobtaada haddii aad rabto in goobtaada ay noqoto mid dagaal leh.
Waxaad ku dari kartaa awoodda dhabta ah ee waxtarka haddii aad awoodidIsku-dubaridka xeeladaha suuqyada kale ee kala duwan. Tusaale ahaan, waxaad isticmaali kartaa suuq-geynta emailka iyo suuq-geynta warbaahinta bulshadafaa'iido u lahaanshahaaga. Adiga oo isticmaalaya istaraatiijiyooyinkan si wada jir ah, waxaad ku taagan tahay fursada ugu fiican ee aad u qaadan kartocontent. SEO waa istaraatijiyad adag. Laguma dari karo diiradda keliya Source .